Galmudug oo xukun ku ridday nin kufsaday gabar lix jir ah | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo xukun ku ridday nin kufsaday gabar lix jir ah
Qareennadii difaacayay eedeysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in loo qafiifiyo xukunka, iyada oo la eegayo qiraalkiisa.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa maanta xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday Maxamed Cabdi Dhoorre oo lagu helay in afduub iyo kufsi uu degaanka Godinlabe ugu geestay gabar yar oo lix sanno jir ah.
Maxkamadda ayaa ku eedeysay in Dhoorre uu falka Kufsiga ah uu u geystay 19-kii bishan August, Farxiyo Cali Maxamed oo lix jir ah, isla-markaana uu u geystay dhaawac halis ah.
Cabdixakiin Maxamed Xirsi oo ah xeer-ilaaliye ku-xigeenka Maxkamadda gobalka Galgaduud, ayaa sheegay in eedeysanaha uu qirtay dambiga lagu soo eedeeyay, isaga oo sidoo kale maxkamadda horkeenay caddaymaha marag furka u ah kufsiga uu ninkan geystay.
Garsooraha Maxkamada gobolka Galgaduud, Axmed Salaad Kullane, ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay in maxkamadda ku xukuntay Maxamed Cabdi Dhoorre shan sanno oo xabsi ah iyo in uu bixiyo labo halaad oo dhiiga gabadha uu kufsaday.
Falkan anshax-xumida ah ee lagula kacay dhibane Farxiyo Cali Maxamed oo lix jir ah ayaa qeyb ka ah dambiyo ka-dhan-ah haweenka, inkasta oo gabdhaha yaryar ee loo geysto tacadiyadda jinsiga ay soo kordhayeen sannadihii dambe.
Deni: Farmaajo ha cadeysto mowqifkiisa
Warar 25 September 2021 20:47
Wuxuu caddeeyay in Farmaajo uu si buuxda Baarlamaanka hortiisa ugu wareejiyay, Ra’iisul wasaare Rooble mas’uuliyadda Amniga iyo doorashooyinka dalka, kaddib qalalaasihii bishii April ee sanandkan 2021 ka dhacay Muqdisho.
Falcelinta madaxda DF ee Qaraxii Muqdisho
Warar 25 September 2021 20:18
Dekadda Hobyo oo xarigga laga jaray
Warar 25 September 2021 18:34
Kenya: Ma aqbali doono go’aanka ICJ ee kiiska muranka Badda
Warar 25 September 2021 16:09
Warar 24 September 2021 7:54
Fahad iyo Farmaajo oo mar kale dirsaday Qoorqoor iyo Mursal